Erey Bixiyaha Naqshadeeye: Fonyada, Faylasha, Soo gaabinta iyo Qeexitaanka Qeexitaanka | Martech Zone
Waxaa jira xoogaa erey bixin ah oo la adeegsaday markii la sharaxayay naqshadaha iyo sawirradan laga soo qaatay Pagemodo.
Sida xiriir kasta oo aad kobciso, waxaa muhiim ah in labada dhinacba ay ku hadlayaan isku af bilowgii. Si lagaaga caawiyo inaad cadaydo luuqadaada naqshadeynta, waxaan la fariisanay nashqadeeyayaasha xirfadleyda ah waxaanan ogaanay ereyada ay inta badan adeegsadaan macaamiisha, iyo kuwa u muuqda inay celceliska qofka celcelis ahaan xoogaa yar.
Infographic wuxuu bixiyaa qeexitaanno iyo sharraxaado eraybixinno socodsiin guud.
Erey bixinta Nidaamka Naqshadeynta:
Wireframes - Qaab-dhismeed aasaasi ah oo aan weli lahayn waxyaabo naqshadaysan.
Comps - siligyada ka dib, tallaabada xigta ee hal-abuurka ah, badiyaa marka naqshaddu u socoto dijitaal
noocooda - marxalad dambe oo loola jeedo in fikrad dhow laga siiyo sheyga shaqeeya.
Erey bixin Qaab-dhismeedka Sawirka
Dhiigbax - u oggolaanshaha naqshad inay ka gudubto cirifka bogga sidaa darteed ma jiri doono wax farqi ah.
Grid - loo adeegsaday daabacaadda iyo naqshadeynta dhijitaalka ah si ay uga caawiso isku-xidhka walxaha si loo abuuro is-waafajin.
Meel cad - aagga bidix faaruq ah si loo xoojiyo waxyaabaha kale ee bogga ku jira.
Gradient - midab ka sii madoobaanaya mid kale ama hufnaan illaa hufnaan.
Xaraashka - booska u dhexeeya xadka iyo sheyga ku dhex jira.
margin - booska u dhexeeya xadka iyo sheyga bannaanka ka ah.
Erey bixin Qaab-dhismeedka Nooca
Hogaaminta - sida khadadka qoraalka loo kala jaro, loona yaqaan dhererka safka.
Kacsi - isku hagaajinta farqiga u dhexeeya jilayaasha erayga.
farshaxan - farshaxanka habaynta astaamaha noocyada siyaabo soo jiidasho leh.
font - ururinta jilayaasha, calaamadaha xarakaynta, tirooyinka, iyo astaamaha.
Erey bixinta Naqshadeynta Webka
Qeybta hoose ka laab - aagga bogga ay tahay inuu adeegsaduhu rogrogo si uu u arko.
Tixgelinta - naqshad websaydh ah oo hagaajinaysa qaabka shaashadda cabbirka kala duwan.
Resolution - tirada dhibcaha halkii inji; 72dpi inta badan shaashadaha, 300dpi daabac.
Midabada websaydhka - midabbada loo isticmaalo webka, oo ay ku metelaan lambar lix-geesle ah oo hexadecimal ah.
Qoraallada aaminka ah ee shabakadda - noocyada aaladda badankood ay leeyihiin, sida Arial, Georgia, ama Times.
Tags: hoosta laabtadhiigbaxaycmykcompsqeexitaannonaqshadeeyeeraybixiyaha naqshadeeyedpifontxarfahagifbaaxadRoobkajpegharaatitaasoo keentaymargindharkajaceylpdfpngppinoocoodapsdxallintajawaabrgbereyadamarka la eegosawiradauiuxmidabada webkafarriimaha aaminka ah ee webkabooska cadcadcadxirmooyinka xargaha